Daawo Sawirrada: Doorashada madaxweynaha dowladgoboleedka Hirshabeelle oo goor dhow billaabatay – Radio Muqdisho
Daawo Sawirrada: Doorashada madaxweynaha dowladgoboleedka Hirshabeelle oo goor dhow billaabatay
Magaalada Jowhar waxaa goor dhow ka bilowday doorashada madaxweynaha dowladgoboleedka Hirshabeelle oo ku tartamayaan laba Musharax oo kala ah Cali Cabdulaahi Cosoble iyo Maxmed Cabdi Waare halka uu tanasulay musharxii sadexaad ee ahaa Cali Caraale.
Madasha ay ka dhaceyso doorashada waxaa goob joog ka ah madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, xubnaha aqalka sare u metelaya Galmudug, wasiirro iyo mas’uuliyiin kala duwan, waxaana hadda socda tirinta codadka wareegga koobaad ee doorashada.
Ammaanka magaalada Jowhar ayaa aad loo adkeeyay iyadoo doorashadu ay ku socoto jawi deggan .
Marki ay soo dhamaato doorashada madaxweynaha waxaa xigi doona tan madaxweyne ku xigeenka oo ay u tartamayaan laba musharax oo kala ah Cali Cabdulahi Guudlaawe iyo Cali Xasan .
Natiijada Doorashada madaxweynaha Hirshabeelle oo lagu dhawaaqay